Ny Fanjavonan’i Wahid Baloch, Literera Sady Mpikatroka Ara-Tsosialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Aogositra 2016 4:59 GMT
Vakio amin'ny teny Română , Español, English
Sarin'i Wahid Baloch avy amin'ny artista Khuda Buksh Abro.
Nisy naka an-keriny tamin'ny 26 jolay lasa teo raha avy nandevina ny namany avy any Umar Khot ao Sindh i Wahid Baloch, literera Baloch sady mpikatroka ara-tsosialy. (Naoty: teny mitovy ny anaram-pianakaviany sy ny foko misy azy.) Tao anaty bus i Baloch rehefa nasaina najanona io, ary navoaka tao tsy araka ny sitrapony izy ary nampidirina tamin'ny fiara iray. Fantatra kokoa amin'ny rariny ara-tsosialy sy ny haisoratra ataony, miasa amin'ny maha-mpikirakira telefonina ao amin'ny Hopitaly Sivily i Baloch ary mavitrika miteny manohitra ny fampanjavonana olona ankaterena ao Balochistan, iray amin'ny fariteny lehibe indrindra ao Pakistan.
Baloch ihany koa no mitantana ny fanasokajiana ny tahirin-kevitry ny tranomboky Sayyad Hashumi ao Karachi izay mitahiry ny fitaovana rehetra efa nivoaka sy tsy nivoaka momba ny Baloch (ny vahoaka), Balochi (ny fiteny) ary Balochistan (ny faritany). Voatifitra ary maty tamin'ny taona 2011 ny mpanorina ny tranomboky Sayyad Hashumi, ny profesora Sabah Dashtyar.
Tsy zava-baovao ao Balochistan, toerana irosoan'ny nasionalista Baloch amin'ny fiokoana mitam-piadiana manohitra ny fanjakana pakistaney, ny fampanjavonana ankaterena. Na izany aza, maro ireo sivily tsy mitam-piadiana—ny ankamaroany dia poeta, mpanoratra, ary mpikatroka izay mavitrika ao amin'ny hetsika fijoroana.
Araka ny lahatahiry ofisialy azon'ny sampam-baovao The News, efa ho arivo ny isan'ny razana feno bala hita tany amin'ny faritra maro tao Balochistan tao anatin'ny enin-taona, ary mihoatra ny atsasak'ireo vatana rotidrotika ireo no voatondro fa avy amin'ny foko Baloch. Namoaka avy eo ny tatitra fa mihoatra ny 112 ny isan'ny mponina ao an-toerana no mbola tsy hita. Tamin'ny taona 2014, nandeha an'arivony kilaometatra namakivaky an'i Pakistan hitadiavana ny anadahiny sy ireo olon'i Balochistan nanjavona i Farzana Majeed. Miampanga ireo sampam-piarovan'i Pakistan, tahaka ireo fianakaviana maro hafa, ho tompon'antoka amin'ireny fanjavonana ireny ny fianakavian'i Majeed.
Tsy mitsahatra ny mitsipaka ireny fanjavonana ireny ny sampan-draharaham-piarovana, saingy milaza kosa ireo vondrona mpandala ny zon'olombelona fa lainga izany, miady hevitra fa lasibatry ny governemanta manokana ireo olona tafiditra amin'ireny hetsika mpisintaka Baloch ireny sy ireo fanta-daza amin'ny literatiora manoratra na miteny momba ny tolon'ny Baloch ho amin'ny fahafahana ireny. Raha vao re ny fanjavonan'i Baloch, dia namoaka fanambarana ny Amnesty International miampanga ny sampan-draharaham-piarovan'i Pakistan, manahy ny amin'ny ain'i Baloch sy ny fahasalamany. Nanangana ekipa hanao famotopotorana ny fanjavonan'i Baloch ny Vaomieran'ny Zon'Olombelona.
Tao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Iza moa ny Kamarady Wahid?” nivoaka ao amin'ny tranonkala Baluch Samachar (izay mizara ireo tantara tsy dia misy mpitatitra ary matetika voafafa avy any Balochistan), i Imtiaz Baloch mahatsiaro ny fahavitrihan'i Baloch sy ny fitiavany ny fokonolona:
Efa nizotra sy nikiry am-pitiavana hanao ny asa fanavotana mahaolona i Wahid Baloch. Nikarakara valandresaka ho an'ny mpanao gazety, fihetsiketseham-panoherana, fivoriana ary diabe maro hanoherana ny fampanjavonana ankaterena ny vahoaka Baloch izy. Ny mponin'i Lyari efa zatra miteny hoe: “Vaky rà ho an'ny hafa i Wahid”. Izany fitiavana manoka-potoana ho an'ny hafa izany no nahazoany ny anaram-bositra hoe “Kamarady”. Tsy misy mahalala an'i Wahid ny ao Lyari, raha vao tsy manampy Kamarady amin'ny anarany ianao(..) Nandrakitra tatitra tsy amin'ny fomba ofisialy ny fakana an-keriny azy ny polisin'i Gadap fa tsy nanaiky hameno fitoriana hanaovana Tatitra Famotopotorana Savaranonando.
Efa asa andavanandron'ny governemanta Pakistaney ny manakana sy mamafa ireo tantaram-baovao avy any Balochistan, ary tafiditra amin'izany ireo tranonkala mitatitra momba ny Hetsi-Pirenena Baloch. Matetika ny mpikatroka Baloch no miantehitra amin'ny Twitter sy ny Facebook hizarana ny tatitra fakana an-keriny sy fampijaliana. Mampiasa ny tenirohy #SaveWahidBaloch ny mpikatroka hanairana ity fampanjavonana ankaterena farany ity:
[Amin'ny sora-baventy: Areheto ny labozian'ny fanantenana ho an'i (Wahid Baloch)]
Efa ho roa volana ankehitriny no nampanjavonina tsy ara-dalàna i Wahid Baloch. Tsy misy ny vaovao momba azy ary mijaly ny fianakaviany.
Fanohizana ny politikam-panjakana amin'ny fanenjehana ireo nahazo fanabeazana ny fampanjavonana ankaterena an'i Wahid Baloch
Efa nahita ity zazavavy kely ity nandray anjara tamin'ny fihetsiketseham-panoherana isaky ny misy Baloch manjavona aho. Androany ny rainy mihitsy no nisy naka ankeriny.
Efa herinandro mahery izao no nakana an-keriny an'i Baloch. Mbola tsy fantatra ny mahazo azy, ary manahy ny amin'ny ainy ny fokonolona, namana ary ny fianakaviany. Ary hoy ny napetrak'i Imtiaz Baloch hoe, “Lehilahy iray niady ho amin'ny famongorana ny fandrahonan'ny fampanjavonana ankaterena no lasa lasibatr'ilay heloka bevava indrindra.”